Free Thinker: မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
ယခုစာတမ်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာရှင်များအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုမှုနှင့် မည်သို့မည်ပုံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်းကို Myanmar Transitional Platform မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးလှမောင်ရွှေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်၊ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့မှ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဒေါက်တာတင်လှုိုင် (စာရေးဆရာ ဘိုးလှိုင်) တို့မှ တစ်ဆင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတွေ ပွင့်လင်းလာသည်နှင့်အမျှ အဖက်ဖက်မှာ ဖြည့်ဆည်းစရာကွက်လပ်များ များပြားလှပါ သည်။ စင်္ကာပူတွင်ရှိသော မြန်မာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များကလည်း မိမိတို့ တတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းဖို့ ကြိုးစားကြပါသည်။ မိမိတို့ လေ့လာတတ်ကျွမ်းသမျှ ပညာရပ်များကို အခါအခွင့်သင့်တိုင်း အမိနိုင်ငံကို ပေးဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေသည်မှာ လက်ထဲမှ ချိုချဉ်များကို ပုလင်းတစ်လုံးထဲသို့ ကြိုးစားထည့်နေသည်နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူပါသည်။ မိမိတို့ တတ်သလောက် ကြိုးစားဖြည့်သော်လည်း စနစ်တကျမရှိသောကြောင့် ပုလင်းထဲရောက် သည်လည်းရှိ ဖိတ်စဉ်သည်လည်းရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် တတ်သိပညာများကို လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အတိအကျ အသုံးချရခြင်းနည်းပါးကာ အလေအလွင့် များရှိသည်ဟု ဆိုနိုင် ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်တွင်းမှ ပြည်ပသို့ ယိုစီးခဲ့ရသည့်ပညာများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းအောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချိန်တွင် တတ်သိပညာ ကူးပြောင်းမှုကို စနစ်တကျ ဖြစ်သွားစေရန်အတွက် ပေါင်းကူးပေး နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်သည်ဟု မြင်ကြပါသည်။ ချိုချဉ်များကို ကတော့ သုံးပြီး ပုလင်းထဲထည့်လျှင် အဖိတ်အစဉ် နည်းပြီး ပုလင်းများ မြန်မြန်ပြည့်သကဲ့သို့ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များကို ပြည်ပမှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရန် စနစ်တစ်ခုရှိပါက ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များ ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ ဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မည် ဟုလည်း ယုံကြည်ကြပါသည်။
ယခုပွဲမှာ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတတ်သိပညာရှင်များ ပူးပေါင်းပြီး လက်ငင်းပေးနိုင်မည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို စနစ်တကျ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တဖြည်းဖြည်း ကြိုးစားဖြည့်ရင်း ကွာဟမှုနည်းလာပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းအလုပ်လုပ် နိုင်လာမည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာ အာရုံစိုက်မှုပိုမို ရရှိလာသည်နှင့်အမျှ အစိုးရအဆင့် ကူညီမှုများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု၊ ပညာဖြန့်ဖြူးပေးမှုတွေကိုလည်း သတင်းများတွင် ဖတ်ရှုရပါသည်။ တစ်ဖက်မှနေပြီး တော့လည်း မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း အပြောင်းအလဲများကို လက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်နေကြသော ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် စီနီယာများ အတန်းဖေါ်သူငယ်ချင်း များထံမှ လုပ်ငန်းခွင် အခက်အခဲများကိုလည်း ကြားရ ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အဆင့်ပေးသော အကူအညီများကို အောက်ခြေသို့ ရောက်သည်အထိ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အခက်အခဲရှိပုံများ၊ ပညာရပ် ဆန်လွန်းသော သီအိုရီများ၊ စနစ်များကို ချက်ချင်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးရန် ခက်ခဲနေပုံများ အစရှိသည့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ မခိုင်မာသေးခြင်းကလည်း ထိုအခက်အခဲများ၏ အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခြေအနေကိုတော့ ကလေးများ ကစားသည့် Matching Game နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးသူများက အ၀ိုင်း၊ လေးထောင့်၊ တြိဂံပုံ၊ ကြယ်ပုံစသည်ဖြင့် အစုံပေးသည်ကို အသုံးပြုမည့်ဖက်မှ သက်ဆိုင်ရာ နေရာတွင် သုံးရန် တွဲဖက်တတ်ရပါသည်။ ဥပမာ - ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများကဲ့သို့ အစားအသောက်များမှ ဖြစ်နိုင်သော အန္တရယ်များ ထိန်းသိမ်း ကွပ်ကဲရာတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဖြစ်သည့် နိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Food Safety သင်တန်းပေးများ ပေးပါသည်။ သူတို့နိုင်ငံများဆီမှ အလွန် ထွန်းကားသော စနစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချပြသောအခါတွင် ထိုစနစ်များကို ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် မဆိုထားနှင့် အပြည့်အ၀ နားလည်ဖို့ပင်ခက်ပါသည်။
ပြည်တွင်းတွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရသူများ Exposure နည်းသေးခြင်းက အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် ပြည်ပမှ ပေးလာသော ပညာရပ်များ၊ စနစ်များမှ မည်သည့်ပညာကို မည်သည့်နေရာတွင် သုံးသင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိထားသော မြန်မာပညာရှင်များမှာမူ အတော်အသင့် လေ့လာရုံနှင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာ များကို ခွဲခြမ်းပြီး သင့်တော်ရာမှာသုံးရန်အတွက် အကြံပေးကောင်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ ပါဝင်ကူညီဖို့အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာများအနေနှင့် မြန်မာပြည်ကို ပြန်စရာမလိုပဲ အီးမေးလ်များ၊ ဖုန်းများဖြင့်ပင် လုပ်နိုင်ကောင်းသည့် အခြေအနေတွင် ရှိပါသည်။ လိုအပ်သည့်အခါ အိမ်တစ်ခေါက် ပြန်လိုက်ဖို့ကိုလည်း နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတွင် ပါဝင်ကြိုးပမ်းလိုကြသူများက ၀န်မလေးကြပါ။
ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာသည်များ၏ အားသာချက်များ
ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာသည်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် NICHE ဟုခေါ်သော “အများမှာမရှိ၊ သည်လူတွေမှာပဲ ရှိသည့်” အခြေအနေများ ကိုလည်း တင်ပြလိုပါသည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာရှင်များက Government နဲ့ NGO အဆင့်ပေးသော မြန်မာပြည်မှာ ဆေးရုံကြီူးများ ဆောက်ရန် Fund အများကြီးပေးမည့်သူများ၊ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဆောက်ပြီး လာသင်ပေး မည့်သူများ မဟုတ်ကြပါ။ မိမိတို့ရောက်ရာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိလုပ်နေသော အလုပ်များကိုထားလျှက် ချက်ချင်းပြန်လာနိုင်မည့် အရေအတွက်မှာလည်း နည်းပါသေးသည်။ သို့သော် မြန်မာများတွင် ပြည်တွင်းက လိုအပ်ချက် (Need) များကို နားလည်မှု၊ အခြေအနေကို သုံးသပ်နိုင်မှုများ ရှိပါသည်။ Interest ဟုဆိုရမည့် မိမိတို့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးတွင် စိတ်ဝင်စားမှုလည်း ရှိကြပါသည်။
မိမိတို့နိုင်ရာ ကဏ္ဍမှနေပြီး ပါဝင်လုပ်ဆောင်လိုစိတ် (Contribution) တွေလည်း ရှိကြပါသည်။ ဥပမာပေးခဲ့သော ချိုချဉ်များ အရောင်အသွေး၊ အရသာ စုံသကဲ့သို့ ပညာရှင်များမှာလည်း နယ်ပယ်အစုံမှာ ရှိကြပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ နေရာစုံ၊ ပညာရပ်စုံတွင်ရှိနေခြင်းကို Heterogeneity ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ပြည်ပတွင် နှစ်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ပြီးသည့်အခါ ထိုက်သင့်သော Exposure, Experience များမှတစ်ဆင့် Expertise ဟုခေါ်သော ကျွမ်းကျင်မှု များလည်း ရှိလာကြပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းမျာ ပုလင်းအလွတ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေသလို ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာသည် များကလည်း မိမိတို့လက်ထဲက အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကို ပုလင်းထဲကို ဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါသည်။
ချိုချဉ်များ ပုလင်းထဲကို မဖိတ်မစဉ် ဖြည့်နိုင်ရေးအတွက် ကတော့နဲ့တူသော Communication Channel, Coordination Body အစရှိသည် များ ဖန်တီးပေးကြပါရန် ယခုပွဲကို ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များ ဆီက တောင်းဆိုလိုပါသည်။ Communication Channel, Coordination Body များကို မည်သို့မည်ပုံ ထူထောင်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို ဆက်ပြီးတင်ပြပါမည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပုံစံများ
ပြည်ပရောက်နေကြသော မြန်မာပညာသည်များမှာ မိမိတို့ တိုင်းပြည်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်အလုပ်လုပ်ပေးချင်ကြပါ သည်။ တစ်ဖက်မှ လိုအပ်ချက်များရှိသလို အလုပ်လုပ်ပေးချင်သော စိတ်ဆန္ဒများ အခြားတစ်ဖက်တွင် ရှိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်မည်နည်းဟု ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြပါသည်။ဤအချက်မှာ ယခုပွဲ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်ရသော ဆက်နွယ်မှု ပုံစံများကို အကျဉ်းရုံးပြီးပုံဖြင့် ပြထားပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် Myanmar Transitional Platform ကဲ့သို့သော ပြည်ပရောက် မြန်မာ ပညာရှင်များ ရှိပါမည်။ MTP အဖွဲ့ဝင်များ၏ နောက်တွင် သူတို့နဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေသော professional societies, academic institutions, international orgs, volunteer/well wisher networks, etc. အစရှိသဖြင့်ရှိပါမည်။ MTP members တွေလုပ်နိုင်မည့် အနေအထားတွေသာမက သူတို့နောက်မှာရှိနေသော အဖွဲ့အသီးသီးက ပေးနိုင်မည့် အကူအညီများကိုလည်း ရယူနိုင်ဖို့ မြော်လင့်သလို ကြိုးစားကြဖို့လည်း စဉ်းစားထားကြပါသည်။
ပြည်တွင်းဖက်ကို ကြည့်လျှင် တတ်ရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီးများ ကိုယ်စီ ကိုယ်စားပြုထားသော အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ နှင့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိကြပါသည်။ ဤအဖွဲ့တွေများမှာ အများသိကြသည့်အတိုင်း တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို မိမိတို့နေရာမှနေပြီး အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသူများဖြစ်ပါသည်။ အပြင်မှာရှိနေသောအဖွဲ့များနဲ့ အထဲက အဖွဲ့များ လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်မည့် ပုံစံလေးများကို ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးကြစေလိုပါသည်။ MTP အနေနှင့်တော့ Seminars, Workshops, training of trainers, data and information sharing/feeding, sourcing out funding from international orgs/well-wisher groups/etc. for the projects inside Myanmar စသည်ဖြင့် အခြေအနေပေးရာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင် သည်ဟု ယူဆပါသည်။
ပွဲပြီးမီးသေဖြစ်မသွားဘဲ ဆက်လက်ပြီးလက်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လည်း အောက်ပါ အချက်များကို အကြံပြုလိုပါသည်။
၁။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ ပုံမှန်အမြဲဆက်သွယ်နိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းတခုစီမှ contact person တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ် (များ) မှ
communications ကိုအမြဲတမ်းအသက်ဝင်နေစေရေးကို ဂရုပြုဆောင်ရွက်ရန်
၂။ တင်ပြသွားသော presentation topics များထဲမှ အနည်းဆုံးတခုကို ယူ၍ pilot project အနေဖြင့် ၂ပတ်မှ ၄ပတ်အတွင်း စတင်နိုင်မည့်
ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် (Collaboration) (ပြည်တွင်းမှ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဓိက
၃။ လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်လျှင် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ coordination body ဖွဲ့စည်းပေးပါရန် (ရှိပြီးဖြစ်လျှင် ထို
coordination body နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါရန်)
ယခုအချက်များမှာ MTP မှ အဆိုပြုတင်ပြထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဧည့်သည်တော်ကြီးများမှဖြစ်စေ ဧည့်သည်တော်ကြီးများကိုယ်စားပြုထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှဖြစ်စေ ဖြည့်စွက်အကြုံပြုလိုသည်များ ရှိလျှင်လည်း အကြံပြုကြစေလိုပါသည်။
အကြံပြုလိုသည်များရှိလျှင် စာတမ်းရှင်များ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာများသို့ ပိုဆောင်၍သော်၎င်း ယခင်ရှိပြီးသော အဆက်အသွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမှ၎င်း ပေးပို့အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
M.B.,B.S (YGN), Master in Public Administration (LKYSPP, NUS)